Tsy Mahavita Manome Fiahiana Ara-pahasalamana Sahaza Ho An’ireo Tambanivohitra Mahantra i Bihar ao India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Septambra 2016 2:18 GMT
Zana-tsampana ambanivohitra navadika ho fitahirizana. Pikantsary avy amin'ny lahatsary Volunteers Video
Ity lahatsoratra ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Video Volunteers, fikambanana media-nà vondrom-pirahamonina iraisampirenena ao India nahazo loka. Dikany iray voatonta no zaraina etsy ambany ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Aao amina zana-tsampan'ny tobim-pahasalamana ao Pranpur, ao amin'ny fanjakana Indiana ao Bihar, malazon'ny hirifiry ny rain'i Ram Subhagram izay tratry ny lefakozatra, , manantena fa hisy mpitsabo tonga hijery azy tsy ho ela.
Fa fantatr'i Ram fa mety ho mandrakizay ny fiandrasany. Olona iray ao anatin'ny efatra any ambanivohitr'i Inde no miaina ao anatin'ny fahantrana, ary ny tsy fahasalamana no antony voalohany miteraka ny fahorian'izy ireo. Raha toa ka misy ny aretina, ny tobim-pahasalamam-panjakana akaiky azy indrindra dia ny zana-toby iray, izay mamaly ny filàna ara-pahasalaman'ny olona eo amin'ny 5.000 amin'ny ankapobeny ary 3.000 avy amin'ireo faritra havoana, foko sy faritra tsy mandroso. Ary raha miteny ny taridàlan'ny Ministeran'ny Fahasalamana fa natao hiasa 24/7 ny zana-tsampan'ny tobim-pahasalamana iray ao amin'ny firenena, ity tobim-pahasalamana ity dia nivoha nandritra ny andro vitsivitsy monja isam-bolana nandritra ny 20 taona farany.
Tsy manana safidy hafa ankoatry ny miandry ny fisokafan'ilay toby i Ram mba hahazoana fitsaboana ho an'ny rainy satria ny fahantrana no tsy hahafahany mitady fitsaboana amin'ireo fiahiana ara-pitsaboana tsy miankina.
Ny tsy maha-eo lava ity foibe ity dia tena ratsy ka nanapaka hevitra ireo mponina tao ny hampiasa ny faritra tavela ho amin'ny fitahirizana entana. Nanazava ny solontenan'ny vondrom-piarahamonina Video Volunteers, i Surendra Sharma izay monina ao amin'ny manodidina ny tanànan'i Madanpur sy nitata ity tantara ity:
Ireo mponina ao Pranpur dia nanomboka nampiasa ilay toerana haolo ho toy ny fitahirizana sakafo sy trano bozaka ampiasaina tsindraindray ho an'ireo havana sy namana mivahiny.
Ny varavaran'ny toby dia manana hidy mandrakizay, fa tsy manana varavarankely ireo tranobe mbola tsy vita, izay miasa ho toy ny varavarana fidirana mankao anatin'ireo tranobe.
Ao amin'ny fahasalamam-bahoaka Indiana, ny zana-toby no tena rantsana sy toerana voalohan'ny fifandraisana eo amin'ny rafitra fiahiana ara-pahasalamana ambaratonga voalohany sy ireo vondrom-piarahamonina ambanivohitra. Ny zana-toby tsirairay dia mpampivelona iray no tokony hitantana azy, miampy vehivavy iray mpiasan'ny fahasalamana sy lehilahy iray. Ireo zana-toby dia mitàna anjara asa amin'ny fitondrana fanovàna fitondrantena no sady manome tolotra mifandray amin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, fiarovana fototra amin'ny aretina, tombana sy fandaharanasa ho fisorohana ireo aretina mifindra.
Na izany aza, tsy araka ny tokony ho izy ny isan'ireo trano fikarakarana marary ireo, ary maro amin'izy ireo no tsy miasa ara-dalàna noho ny tsy fahampian'ny famatsiam-bola sy ireo olana hafa. Araky ny tatitry ny Firenena Mikambana, 75% amin'ireo fotodrafitrasa ao India dia mivangongo any amin'ny tanàndehibe izay 27% monja amin'ny mponina ao India no monina any. Ny isan'ny mponina ao ambanivohitr'i India dia manodidina ny 716 tapitrisa (72%) nefa mbola tsy maintsy mandeha lavitra any amin'ny tanàndehibe akaiky azy noho ny olana ara-pahasalamana satria mbola tsy misy tobim-pahasalamana akaiky azy ireo.
Ohatra iray amin'ireo fahabangàn'io rafitra io ilay zana-toby ao Pranpur. ”Amin'ny fotoana tsy fahita matetika izay hisokafan'ilay tobim-pahasalamana, miteny aminay ireo mpitsabo mpanampy hoe tsy manana fanafody ny toby,” hoy ny Ram Subhagram tezitra.
Heverina ho anjaran'ny Ministeran'ny Fahasalamana sy ny Fiahiana ny Fianakaviana ny mividy ny fanafody sy ny kojakoja, ary hatramin'ny fanomezana karama ireo vehivavy mpiasan'ny fahasalamana sy ny mpampivelona mpanampy ny mpitsabo, ankoatra ny amin'ny tahirim-bola ho fitsinjovana ny hoavy. Izany no nahatonga ny fanontaniana, ‘raha karamaina hiasa mandritra ny ny taona iray ny toby nefa indraindray ihany vao mba miasa, tsy tsara tantana izany ilay vola natokana ho azy ?’
Ny vehivavy ao Pranpur dia nanambara tamin'i Surendra ny fomba fiantraikan'ny tsy fanànana sampana tobim-pahasalamana mavitrika, izay heverina fa hanaraka ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, isan'izany ny sakafo, ny fiarovana amin'ny aretina, ny fivalanana, sns., amin'ny reny sy ny zaza. Niteny i Brideshini Devi:
Any amin'ny 5-6km miala an'i Madanpur ny hopitaly akaiky indrindra eto. Mametraka loza be mitatao amin'ny ainy ny fitondràna vehivavy bevohoka be amin'ny làlan-dratsy. Tsy afaky miatrika ny fandaniana amin'ny hofan'ny fiara izay mitentina Rs. 500 izahay, ary tsy izahay mihitsy no hahazo fampindramam-bola moramora ho amin'izany.
Ny tahan'ny fahafatesan'ny reny sy ny zaza ao amin'ny fanjakàn'i Bihar no fahatelo avo indrindra ao amin'ny firenena, any amin'ny 219, izay mbola avo noho ny 178, salanisa nasionalin'i India. Ny firenena ihany koa dia manana zaza eo amin'ny 6.6 tapitrisa eo matetika tsy ampy sakafo, ny isa avo indrindra faharoa amin'ny zaza tsy ampy sakafo ao India .
Ny tatitra avy amin'ny Jan Swasthya Abhiyan, ny sampana Indiana avy amin'ny Hetsi-Bahoaka ho an'ny Fahasalamana, dia namboraka fa ny vola mivoaka isan-taona avy amin'ny paosin'ny mponina Bihary iray dia Rs 41.000 (eo amin'ny 620 US dolara eo ), izay matetika laniany amin'ny fanafody sy fitiliana.
Ireo fianakaviana miaina ambanin'ny Fetran'ny Fahantràna izay tsy afaka mamoaka vola ho an'ireny fandaniana ireny dia mindrana vola na mivarotra ny fananam-pianakaviana, mikorisa bebe kokoa mankany an-davaka maintin'ny fahantrana izay andrandrain'izy ireo hialàna.
Asehon'ny Antontan'isa 2015 momba ny Fahasalamana Any Ambanivohitra ireo fomba maro mampikororosy ny fotodrafitrasa ara-pahasalamana any ambanivohitra ao Bihar. Araka ny tatitra, tobim-pahasalamana iray ao Bihar no miahy olona eo amin'ny 9.000 (mifanohitra amin'ny fenitra 3.000), foibem-pahasalamana ambaratonga voalohany miahy olona eo amin'ny 50.000 (mifanohitra amin'ny fenitra 30.000) ary ny foibem-pahasalamana iray tantanan'ny vondrom-piarahamonina miahy olona eo amin'ny 1.3 tapitrisa (mifanohitra amin'ny fenitra 1.2 tapitrisa).
Toa an'i Ram sy Brideshni, misy fianakaviana an-jatony maro ambanin'ny Fetran'ny Fahantràna ao amin'ny tanan'i Pranpur izay mijaly noho io tsy fiasan'ny tobim-pahasalamana io.
Avy amin'ireo vondrom-piarahamonina atao anjorom-bàla ireo solotenan'ny fikambanana Video Volunteers’ ao India ary mamokatra lahatsary avy amin'ireo tantara tsy voatatitra. Ireny tantara ireny dia ‘vaovao avy amin'ireo miaina azy.’ Manome ny zavamisy tena avy eny an-toerana ho an'ny zon-olombelona sy ny fanambin'ny fampandrosoana erantany ry zareo.